Angady sy angady
Wiremesh & Fefy
WV dia nanamafy tranga COVID-19 vaovao efa ho 500, faritra telo no mena | WDVM25 & DCW50
Fotoana fandefasana: Jun-22-2021
Charleston, West Virginia (WOWK) -Raha nitatitra tranga COVID-19 efa ho 500 ny fanjakana, dia misy distrika telo ankehitriny aseho amin'ny mena amin'ny sari-tanin'ny rafitra fampandrenesana an'i West Virginia. Ny departemanta West Virginia Health and Human Resources dia nanamafy tranga 495 vaovao an'ny COVID-19 tato anatin'ny 24 ora. ...Hamaky bebe kokoa »
Fampiasana ny machetes
Fotoana fandefasana: Apr-02-2021
Tamin'ny tantaran'ny sinoa dia nampiasa ny machete ho fitaovam-piadiana an'ady ny machete, ary ny machete dia nampiasaina tamin'ny vanim-potoana rehetra, ary ny slash-and-burn dia famaritana ny anjara toeran'ny machete tamin'ny andro taloha. Rehefa nandeha ny fotoana dia nosoloina miandalana ny machete tamin'ny milina mandroso, saingy ...Hamaky bebe kokoa »
BLADE MACHETE GEMLIGHT
Ny vy vita amin'ny karbaona no fitaovana nentim-paharazana nampiasaina tamin'ny fanaovana lelany machete. Ny karbaona dia ampiana vy mba hanome hery ny vy sy hampitomboana ny hamafin'ny firaka, fa ny fitomboan'ny votoatin'ny karbaona koa dia mahatonga ny vy ho marefo kokoa. Ny vy vy dia efa manodidina ny 4000 yrs mahery. Ny fampiasana ny «carbo» ...Hamaky bebe kokoa »
Ahoana no hikarakarana sy hikolokoloana ny machete anao?
BLADE CARE Amin'izao fotoana izao dia ny varotra machete efa be mpividy sy be mpampiasa indrindra dia ny Carbon Spring Steel, ny machete Gemlight dia mampiasa vy vy lohataona avo miaraka amin'ny Mn nohatsaraina. Fa ny vy vy karbaona kosa mora mihombo kokoa, ary tokony hosaronan'ny menaka maivana foana hanakanana ny harafesina. Manakana ny moisturu ny menaka ...Hamaky bebe kokoa »
Adiresy: Shuangtian Industrial Park, Dingningdian Town, Dingzhou City, Hebei Province, Sina